AmaGqabantshintshi Esiwafumeneyo Kwindibano Kunye NoNgũgĩ wa Thiong'o
03/03/2017 10:36 SAST | Updated 06/03/2017 09:33 SAST
Kubalulekile ukuba sithethe ulwimi lwasekhaya singabantu abantsundu. Kwaye siziqhenye ngolwazi lwethu ngamalwimi ezinye intlanga zakwaNtu.
Kubalulekile ukuba sithethe ulwimi lwasekhaya singabantu abantsundu. Kwaye kubalulekile ukuba siziqhenye ngolwazi lwethu ngamalwimi ezinye intlanga zakwaNtu. Oku kubangela ukuba sikwazi ukwakha imvisiswano kunye nooBhuti nooSisi bethu jikelele eAfrika. uThiong'o uye wasibekela ngokucacileyo phezolo ngendaba yokuba umntu ngamnye ontsundu kumele abenolwazi lolwimi lwasekhaya okanye oluthethwa ekhaya. Kumele siluthethe singathintilizi, kwaye siqiniseke ngokufumana ulwazi lokufunda nokubhala ngolwimi lakwaNtu.
KwaXhosa kuthiwa "Umthi ugotywa usesemncinci", ngoko ke, lonto ithethukuba, ulwimi oluthethwayo endlini kunye nabantwana lubangela ukuba kube kulula ukufumana ulwazi lokufunda nokubhala ulwimi lwakho lwasekhaya.
Oku kuchaza ukuba INkcazelo yeKharityhulam yeSizwe ihlaziyiwe, ukwenzela ukuba abantwana bakwazi ukuthetha ngolwimi lwakubo naseZikolweni. Kumele amaBanga R-12 avumele abaFundi bakhethe ulwimi abafuna ufundiswa ngalo ngoTitshala. Kwaye iPolisi zofundo zaseMzantsi Afrika, kumele ziqinisekise ukuba uMthetho oLawula iZikolo zaseMzantsi Afrika ujongane nokuphuhlisa impumelelo yabafundi eZikolweni.
UThiong'o uye wathi abantu kumele babizwe ngamaGama abazibiza ngawo. Lonto ithetha ukuba indelelo esiyibonayo phakathi kwethu singabantu bomthonyama kumele iphele, kuba siyifunde kwaBelungu. Isizwe sakwantu kumele sime sibambene izandla kuze sizokwazi ukunqoba konke okuza ngobubi kuthi. Uphinda acacise uThiong'o ukuba indaba yokuthi isiNgesi senziwe ulwimi lokuQala oloNgezelelweyo eZikolweni, bekuyindlela yokuthi Abelungu baqiniseke ngokusicinezela ngeColonialsm.
Ulwimi lwasekhaya asoze lwaphela mandla kuba saluncanca ebeleni, nto nje thina kumele sizikhumbuze ngemvelaphi netsukaphi yethu sizwe esiNtsundu. uSimamkele Dlakavu uye watsho kwavokotheka phezolo esithi kunzima ukuba umntu afumane amaGama anaMandla okucacisa ukuba uthetha ukuthini xana ebeka iingcinga zakhe kwiThesis yakhe.
Kudla ngothiwa ke isiXhosa asiTolikwa kodwa, inyaniso emsulwa yilena yokuba anqabile amaGama aneNcasa okuhlaluhlalunya ukuba umntu uthini ngeSintu xana eyibeka indaba yakhe ngesiLungu. Lonto ichaza ukuba kufuneka izakhono nezithethe eziya kusinceda ukuba sikwazi ukuzimela nokuthabatha inxaxheba ekuhlaleni njengabemi belizwe elikhululekileyo; nokuba sivela kweyiphi imo yezentlalo, uhlanga, isini, sikhangeleka njani ngokomzimba okanye sikweliphi inqanaba lengqiqo.
Ukubhala, nokuthetha ulwimi lwethu ku ngundoqo ekulungiseleleni, kanye nasekucwangciseni imibono yethu yokuzimanya nombutho weFees Must Fall ngaleNdaba yeDecolonisation kwezeMfundo eZikolweni kwaye neYunivesethi jikele eMzantsi Afrika.
Undoqo ekulawuleni ukuqukaniswa kwemfundo kukuqinisekisa ukuba izidingo ziyachongwa zize zisonjululwe ngawo onke amaqela enkxaso efanelekileyo. Ukusombulula izidingo zabantu abantsundu, kumele sisebenzisane kunye, singabaFundi, aBazali, ooTitshala, singawalibali amazwi kaNgũgĩ wa Thiong'o asishiye nawo esithi: "In colonial conquest, language was meant to complete what the sword had started -- what the sword had inflicted upon the black body." Ukuva kwami lamaZwi, intliziyo iye yalihlwili, kodwa ke mzi oNtsundu, sizolilwela iZwe lethu, namaLwimi ethu, asijiki.
MORE:Ngugi wa ThiongoVoices